Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. #बुद्ध – Janata Live
बुद्धको दाँत बोक्ने हातीको निधन
श्रीलंकन सरकारले 'राष्ट्रिय निधि’ घोषणा गरेको एउटा चर्चित हात्तीको निधन भएको छ । उक्त हात्ती बुद्धको दाँत भनिएको अस्थिधातु राखिएको एउटा बाकस बोकेर मध्य श्रीलंकामा प्रत्येक वर्ष आयोजना हुने एउटा विशेष धार्मिक समारोहमा सहभागी हुन्थ्यो । क्यान्डी नगरमा अवस्थित एउटा प्रसिद्ध बौद्ध मन्दिरमा आयोजना गरिने समारोहमा प्रयोग गरिने १०० हात्तीमध्ये यो हात्ती प्रमुख थियो । परम्परागत मान्यताअनुसार विशेष गुण भएका र लामा दाह्रा भएका हात्तीलाई मात्र त्यस्तो विशेष धार्मिक भूमिका दिने गरिन्छ । यो हात्तीको जन्म सन् १९५३ मा भारतमा भएको थियो । श्रीलंकाका एक चिकित्सक तथा भिक्षुले उपहारमा उक्त हात्ती पाएका थिए । मैसूरका महाराजले आफ्ना एक नातेदारको उपचार...
बृष राशि : ई ऊ ए ओ बा बि बु बे बो: समय मध्यम प्रकृतिको छ। खानपानमा विचार पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ अनुसरण गर्ने छन् । आर्थिक पाटोमा पनि छलाङ्ग मार्ने देखिन्छ । सामाजिक क्षेत्रमा पनि हजुरको ख्याति बढ्ने छ । मिथुन राशि का की कु घ ङ छ के को हा: आजको दिन सफल छ। समय हजुरको पक्षमा छ । हनुमानको प्रार्थना यहाका लागि राम्रो हुनेछ। आर्थिक क्षेत्रमा पनि परिवर्तनको योग छ । लामो समयको प्रतीक्षा समाप्त हुने देखिन्छ । कर्कट राशि : हि हु हे हो डा डी डु डे डो: ज तपाईंको दिन राम्रो देखिँन्छ । हरेक विषयले...
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ)आज आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउनेछ । विशिष्ट व्यक्तिबाट पुरस्कार तथा हौसला प्राप्त हुनेछ । आर्थिक क्षेत्रमा सोचे जस्तै लाभ लिन सकिएला । मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा)आफन्तसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ । कुनै कुराले मनमा शान्ति छाउनेछ । मनोरञ्जनमा सहभागिता भइएला । प्रेममा सम्बन्धमा मधुरता छाउने छ । सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे)चलाखीपूर्ण बोलीको प्रभावले आँटेको काम हुनेछ । जोशजाँगर र हिम्मत बढ्नेछ । कला र गलाको प्रभाव बढ्नेछ । वाहन लाभ पनि हुने समय छ । तुला (रा, रि, रु, रे,...
आजको राशिफल : वि.सं. २०७८ पौष २ गते शुक्रवार : श्री मनकामना देवीकाे कृपाले यी राशिहरूकाे चम्किनेछ भाग्य मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) –आम्दानी बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ । गरेका कामबाट राम्रै लाभ हुनेछ । श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ । पढाइमा प्रगति हुनेछ । मिष्टान्न भोजनको अवसर प्राप्त हुने योग छ । मनमा बसाइ सर्ने, सरुवा हुने, स्थान परिवर्तन अथवा व्यवसाय वा पेसामा परिवर्तनको धारणा पलाउन सक्छ । नयाँ काममा हात हाल्ने समय छ । आजको भाग्यबल ५० प्रतिशत देखिन्छ, साथै आजका लागि शुभ अङ्क : २ र शुभ रङ्ग :...
राशिफल, वि.सं. २०७८ मंसिर २१ गते मङ्गलवार || मंगलवार श्री गणेशकाे प्रिय दिन, यी राशिहरूकाे चम्किनेछ भाग्य मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) –भाग्यबलमा अभिबृद्धि हुनेछ । धार्मिक वा दार्शनिक गतिविधिमा आकर्षण बढ्नेछ । रोकिएका काम सम्पादन गर्न मद्दत पुग्ने छ । आज भाग्यमा रहेको चन्द्रमा कर्मक्षेत्रमा प्रवेश गर्दैछ, अत: व्यापार गर्नेले बेलुकीपख सोचेजस्तै लाभ लिन सक्नेछन् । लगानीमा रहेको रकम उठाउन गरिएको प्रयास सफल हुनेछ । सामाजिक कामबाट प्रशंसा प्राप्त हुनेछ । आजका लागि शुभ अङ्क : ९ र शुभ रङ्ग : पहेंलो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्यसिद्धि...
राशिफल, वि.सं. २०७८ साल मंसिर १० गते शुक्रवार || शुक्रवार श्री पाथिभरा देवीकाे प्रिय दिन, यी राशिहरूकाे चम्किनेछ भाग्य मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) –दिनको सुरुवातमा आलस्य र थकानको महसुस भए पनि आनन्द र उल्लासको वातावरणमा समय व्यतीत हुनेछ । आम्दानीको नयाँ स्रोत देखा पर्नेछ । डुबेको धन अप्रत्याशित ढङ्गले फिर्ता आउन सक्छ । परिवारका सदस्यहरूमा खुसी हुनेछ । दिन ढल्दै जाँदा ज्ञानमूलक क्षेत्रमा आकर्षण बढ्नेछ । पठनपाठनमा मन जानेछ । आजका लागि शुभ अङ्क : ४ र शुभ रङ्ग : घिउ रङ हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्यसिद्धि...